Usoro - Nlereanya 3D - Geofumadas
Ihe omumu - 3D Model
Blender 3D Site na nkuzi a ụmụ akwụkwọ ga-amụta iji ngwa ọrụ niile wee depụta ihe na 3D, site na Blender. Otu n'ime usoro iheomume kachasị mma na-emeghe ma na-emeghe, nke emere maka ịme ngosi, nsụgharị, ihe ngosi na 3D data emana. Site na interface dị mfe ị ga-enwe ike inweta ihe ọmụma dị mkpa iji chee ihu ...
Ihe omumu - 3D Model Usoro - Geospatial Usoro - LandWorks Usoro Blender
Sketchup Modelling AulaGEO na egosiputa usoro ihe nlere nke 3D na Sketchup, obu ihe di iche iche nke ichota ihe omuma ihe omuma nile di na mpaghara. Ọzọkwa, enwere ike ịkọwapụta ihe ndị a na ụdị dị na Google Earth. N'ime usoro a, ha ga-enwe ike ịmụ echiche ndị bụ isi nke eserese na ihe atụ 3D nke ...
Ihe omumu - 3D Model Usoro ọmụmụ
Mụta Autodesk 3ds Max Autodesk 3ds Max, bụ sọftụwia zuru oke nke na-enye ngwaọrụ niile enwere ike iji mepụta atụmatụ na mpaghara niile enwere ike ịme dị ka egwuregwu egwuregwu, ụlọ, ime ụlọ na mkpụrụedemede AulaGEO na-enye Autodesk 3ds Max N'ezie, site na usoro AulaGEO, ọ na-amalite site na ncha, na-akọwa isi ọrụ nke ...
Ihe omumu - 3D Model 3Ds Max ọmụmụ
Mepụta ụdị dijitalụ site na onyogho, yana sọftụwia na - akwụghị ụgwọ yana Recap N’usoro a ị ga - amụta imepụta ma mekọrịta ya na ụdị dijitalụ. - Mepụta ụdị 3D site na iji ihe oyiyi, dị ka usoro fotommetry drone. - Jiri software efu About3D na MeshLab - Mee ya site na iji AutoDesk Recap, - Mee ya site na iji Bentley ContextCapture, - Mee ka igwe ojii ...
Ihe omumu - 3D Model Usoro - LandWorks Usoro AutoDesk Recap